काठमाडौं कोरोना कारखाना नबनोस - Parichaya.com
काठमाडौं कोरोना कारखाना नबनोस
By परिचय	 On १ माघ २०७८, शनिबार ११:५३ 0
गणित र ग्राफले पुष्टि गरिसक्यो कोभिड–१९ अब किस्सा र मजाक मात्रै रहेन । देशको राजधानी काठमाडौं उच्च जोखिममा रहँदा समेत ढाकछोपको रणनीति अप्नाइएको छ । परिस्थिति काबु बाहिर नजाँदै गम्भीर भएर समस्याको हल खोज्नु पर्ने हो, तर तालमेल मिलेको छैन । सङ्कटमोचनका लागि जुक्ति र उपायको खोजी गर्न ढिला भएमा ५० लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौं कोरोना कारखाना बन्नेछ । त्यसघडी सरकारले कि काठमाडौं छोड कि काठमाडौं नआऊ भन्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ । बाक्लो जनसङ्ख्याको भार थामेको काठमाडौं दिनप्रतिदिन कोरोना कहरले त्रसित बनेको छ । सानातिना प्रशासनिक कार्यसम्पादनका लागि पनि काठमाडौं आउजाउ गर्नै पर्ने शासकीय प्रणालीलाई सुधार गर्न नसक्दा प्रकोप बढ्यो । परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने नीति कायमै राख्नुपर्छ । परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएकालाई आइसोलेसनमा बस्ने योजना ल्याउनुपर्छ । सम्पर्कमा आएकालाई पहिचान गर्न ढिलो गर्दा भुसको आगो जस्तै हुनसक्छ । रणनीतिक योजनामा दू्रतगतिमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । सङ्क्रमित खुलमखुला हिँडडुल गरेमा कारवाही गर्ने सरकारी नीति कागजमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन ।
गत मंसिर पुस प्रमुख चारवटा राजनीतिक दलको महाधिवेशन र राष्ट्रिय भेलामा वित्यो । गाउँगाउँबाट प्रतिनिधि आए गए । ओमिक्रोन समुदायमा फैलनु अधिवेशनको उपज हो । देश र जनताका लागि समर्पित राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनले नै महामारीलाई मलजल गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
कोरोनाविरुद्धको खोप सडेर जाने अवस्थामा छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालय खोप लगाउन अल्छी गर्छ । खोप लगाउन आऊ भन्ने होइन, स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँगाउँ खोप लगाउने जाऊ भन्नु पर्ने हो तर केवल निर्देशन कामयावी छैन कोरोना जित्नका लागि । अफ्रिका खोपको खोजीमा छ, नेपालले खोप खरिद गरेर पनि किन खोप लगाउन अलमल गरेको छ । संघीयताको अभ्यास भनिए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भयो । अस्पताल भरिभराउ हुनु स्वास्थ्य सङ्कटको संकेत हो । गत मंसिर पुस प्रमुख चारवटा राजनीतिक दलको महाधिवेशन र राष्ट्रिय भेलामा वित्यो । गाउँगाउँबाट प्रतिनिधि आए गए । ओमिक्रोन समुदायमा फैलनु अधिवेशनको उपज हो । देश र जनताका लागि समर्पित राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनले नै महामारीलाई मलजल गरेको स्पष्ट हुन्छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड प्रतिनिधिले पालना गरेनन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कारोना पुष्टि भएपछि प्रधानमनत्री देउवा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । ओलीलाई पनि देउवाको भेटले जगजगी थप्यो । काठमाडौं कोरोनाको कारखाना हो ? सरकार होइन भन्न सक्ने अवस्थामा छैन्. ।
सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढीकोे जमघटमा प्रतिबन्ध लगाए पनि यो प्रभावकारी देखिएको छैन् । कोभिड फैँलदो अवस्थामा छ । परीक्षणको २६ प्रतिशतको हाराहारीमा सङ्क्रमित देखिएको हुँदो यो अझ उकालो लाग्ने अवस्थामा छ । यत्रतत्र भिडभाड कायम नै छ । अस्पतालमा विरामीको चाप बढेको छ । मतदाता नामवली संकलनका लागि भिड नै छ । खोप केन्द्रमा लाइन छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि लाइन छ । नाराहिटी परिसरमा मध्यरातदेखि इपासपोर्टका लागि लाइन छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिन भिड छ । यातायात, मालपोत, नापीतिर त्यस्तै भिड छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन, हवाइ अड्डा, बसपार्कमा भिडभाडको अवस्था छ । यो भिडमा कोभिड जरुर छ । समय अनलाइनको छ तर सबैतिर लाइन नै लाइन छ । सरकारी कार्यालय अझै प्रविधिमैत्री छैनन् । कागजी सिफरिसमा नै रमाएको छ । सेवाग्राहीलाई कुपन सिस्टम दिन आनाकानी गर्छ ।
संस्कार र संस्कृतिमा परिमार्जनको खाँचो देखिइसकेको छ । सरकारको मात्रै भर नपरी नागरिक स्वयम्ले स्वास्थ्य सावधानी अप्नाउनु अपरिहार्य बनेको छ । समस्या आइसकेपछि सरकारको मुख ताक्दा ढिलो हुन सक्छ । सरकारले सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आफ्ना अवयवलाई चलायमान र जागरुक बनाउनु पर्छ । काठमाडौं कोराना कारखाना मात्रै होइन कालको मुख नबनोस् । खराब दिनको सुरुवात भइसकेको छ । कोरोनासँग खेलाँची गर्नु आत्माघाती हुन्छ । खोपलाई प्राथमिकता दिएर भिडभाड नियन्त्रणको पहल अविलम्व गर्न आवश्यक छ । मुलुकभर १८ हजार हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित देखिदा आधाभन्दा बढी काठमाडौंमा छन् । सरकारी सेवा प्रदायक निकाय हट स्पट बनिरहेको छ । प्रशासनिक कामका लागि नै भिड हुँदा अवस्था गम्भीर हुन सक्छ । फेरि अर्को लकडाउन थाम्न नागरिकलाई सास्ती हुनेछ । अर्थतन्त्रभन्दा जीउज्यानको सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ महामारीमा । काठमाडौं कोरोनाको कारखाना नबनोस् । सरकारले राजधानीलाई सावधान हुन अपिल गरोस् ।